ओमेगा : उच्च शिक्षामा उत्कृष्ट - करियर - साप्ताहिक
एजुकेसन हबका रूपमा लोकप्रिय कुमारीपाटी, ललितपुरमा अवस्थित ओमेगा +२ शिक्षामा आफ्नो फरक पहिचान बनिसकेको एउटा प्रख्यात शैक्षिक संस्था हो । विषयदक्ष एवं ख्यातिप्राप्त अनुभवी शिक्षक समूहबाट प्रवद्धित एवं सञ्चालित यस कलेजमा विज्ञान, व्यवस्थापन र मानविकी समूहका विभिन्न विषयको अध्यापन हुन्छ । यथेष्ट भौतिक पूर्वाधार एवं गुणस्तरीय अध्यापन हुने एवं विद्यार्थीमैत्री वातावरणमा आवश्यक पृष्ठपोषण र प्रोत्साहन प्रदान गरिने भएकोले यो +२ विद्यार्थीको रोजाइमा परेको छ र उत्कृष्ट नतिजासमेत दिँदै आएको छ ।
विद्यार्थीमा राष्ट्र र समुदायप्रति
नैतिक मूल्य अनुभव गराउने ओमेगाको विशेषता हो
१) ओमेगाको सफलताका केही मानक पक्ष बताइदिनुहुन्छ कि ?
 कुशल व्यवस्थापन तथा विषयदक्ष पूर्णकालीन शैक्षिक जनशक्ति
 शान्त, उत्प्रेरक एवम् विद्यार्थीमैत्री वातावरण
 विद्यार्थीहरूलाई निरन्तर पृष्ठपोषण तथा परामर्श
 विद्यालय परिसरमै सुरक्षित एवम् स्वस्थ छात्रावास आदि हाम्रा सफलताका मानक हुन्
२) +२ अध्ययनका लागि ओमेगा नै किन ?
ओमेगा कलेज विषयविज्ञ, पाठ्यपुस्तक लेखक तथा चिरअनुभवी शिक्षक समूहबाट प्रवर्द्धित शैक्षिक संस्था हो । यहाँ विद्यार्थीहरूले पारिवारिक वातावरणमा समग्र व्यक्तित्व विकासको अवसर पाउँछन् ।
३) ओमेगाका विशेष र सबल पक्ष के के हुन् ?
ओमेगाका विशेषता र सबलतालाई एउटा कोणबाट मात्र अर्थ्याउन सकिन्न । यसलाई बुझ्न भिन्नभिन्न कोणबाट नियाल्नु उचित हुन्छ । जस्तै :
शैक्षिक संस्थालाई मापन गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कसी नतिजा हो । यसलाई दुई ढङ्गले केलाउन सकिन्छ । वार्षिक परीक्षाको नतिजा र +२ पछिको अध्ययनमा विद्यार्थीले मेडिकल, इन्जिनियरिङ, सीए, कृषि विज्ञान आदिमा हासिल गरेको छात्रवृत्ति । यी दुवैमा ओमेगाको अवस्था उच्च र सुदृढ छ ।
 भौतिक पूर्वाधार :
+२ अध्ययनका लागि आवश्यक स्वस्थकर भवन, फर्निचर, प्रयोगशाला, उपकरण, खेलमैदान, पुस्तकालय आदि फूर्वाधारले ओमेगा सबल छ ।
 अतिरिक्त त्रियाकलाप :
मानिस सबै शैक्षिक उपलब्धिले मात्र बाँच्दो रहेनछ । अहिले त खेल, कला, सङ्गीत आदि जीवन बाँच्ने अनेक क्षेत्रको विकास झएको छ । यही वास्तविकतालाई दृष्टिगत गरी ओमेगाका विद्यार्थीहरूलाई अतिरिक्त त्रियाकलापको अभ्यास यथेष्ट मात्रामा गराइन्छ ।
 शिक्षण, मूल्याङ्कन, पृष्ठपोषण र परामर्श :
ओमेगामा दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकहरूबाट गुणस्तरीय शिक्षण गरिनुका साथै आवधिक मूल्याङ्कन पनि नियमित रूपमा हुन्छ । सिकाइका क्रममा कमजोर देखिएका विद्यार्थीहरूलाई पृष्ठपोषण तथा कमजोरी निवारणका लागि उचित परामर्शसमेत प्रदान गरिन्छ ।
४) एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थी तथा निजका अभिभावकलाई केही सुझाव ?
प्रथमतः एसईई उत्तीर्ण विद्यार्थीहरू तथा तमाम अभिभावकलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना छ । साथसाथै कसैको भ्रम वा हल्लाका प्रभाव नपरी +२ अध्ययनका लागि शैक्षिक दृष्टिले सुदृढ शैक्षिक संस्था र विद्यार्थीको रुचि र सामर्थ्य सुहाउँदो विषय चयन गर्न आग्रह गर्दछु ।
+२ सम्मको सम्पूर्ण शिक्षा मैले ओमेगाबाटै हासिल गरेँ । मैले ओमेगालाई भविष्य निर्माणमा उत्सुक विद्यार्थीहरूको असल साथीका रूपमा पाएँ । म ओमेगामा अध्ययन गर्न पाएकामा गौरवान्वित छु । ओमेगाका दक्ष तथा अनुभवी शिक्षकबाट पाएको ऊर्जाशील उत्प्रेरणा र सूक्ष्म सिकाइकै फलस्वरूप हाल म निःशुल्क छाक्रवृत्तिमा IOM मा अध्ययनरत छु ।
– ओमिका डङ्गोल ––B.Pharma, IOM महाराजगन्ज
उच्च अध्ययनका दौरानमा म काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न शैक्षिक संस्था पुगेँ । यसै क्रममा म जब ओमेगा कलेज पुगेँ, तब एकाएक प्रभावित भएँ र भर्ना भई अध्ययन आरम्भ गरेँ । मैले पढेर जीवन बनाउँछु भन्ने विद्यार्थीहरूका लागि ओमेगा कलेज एउटा उत्तम गन्तव्य भएको ठानेको छु । मैले यही कलेजबाट उत्प्रेरक र गहन शिक्षा पाएकाले आज निःशुल्क छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्न पाइरहेको छु ।
– राजन केसी –पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस
+२ अध्ययनका लागि कुन शैक्षिक संस्था छान्ने हो ? यो सबै SEE उत्तीर्ण विद्यार्थीमा जाग्ने प्रश्न हो । म पनि यही प्रश्नले डोर्‍याउँदै ओमेगा कलेज पुगेँ र ओमेगा नै छनोट गरेँ । मैले ओमेगाबाट +२ उत्तीर्ण गरेकामा गर्व लागेको छ । विगतको सबल शैक्षिक पृष्ठभूमिका कारण हाल म काठमाडौं विश्व विद्यालयको निःशुल्क छात्रवृत्तिमा MBBS अध्ययन गरिरहेकी छु ।
– अनु गौतम – KU, Dhulikhel
मैले विद्यालय तहदेखि नै ओमेगामा शिक्षा आर्जन गरेँ । +२ शिक्षा पनि मैले आफ्नै विद्यालयबाट लिएँ । त्यहाँको उत्प्रेरक, गहन तथा विद्यार्थीमैत्री सिकाइले मेरो भविष्य निर्माणको सही बाटो तय गरिदियो । फलतः म हाल IOM मा निःशुल्क छात्रवृत्तिमा द्यम्क् अध्ययन गरिरहेकी छु ।
– पूजा सिग्देल –BDS महाराजगन्ज
मैले +२ तहको अध्ययन ओमेगाबाट पारिवारिक वातावरणमा पूरा गरेँ । मैले ओमेगा कलेजमा बिताएको समय चिरस्मरणीय छ । विद्यार्थीको मौलिक प्रतिभाको विकासमा ओमेगाले विशेष प्रयास गर्ने पाएको मैले अनुझव गरेको छु । शैक्षिक लगायत अन्य अतिरिक्त त्रियाकलापका प्रतिस्पर्धामा ओमेगाकै उत्प्रेरक वातावरणले मैले विजय हासिल गरेँ । हाल म ओमेगाबाट पाएको स्तरीय शिक्षाकै कारण पूर्ण छात्रवृत्तिमा IT Engineering अध्ययन गरिरहेको छु ।
– बत्सल घिमिरे (IT Engineering) – Minerva Schools at KGI San Francisco, California, USA
अस्ताए सुक गुरुङ
मुटु रोग र रक्तचाप